UHlabisa usinga emuva aqalaze nephambili - Bayede News
IBAYEDE ilumane indlebe noMnu uVelenkosini Hlabisa ngezinkinga ezikhungethe oHulumeni Bendawo nomasipala basemakhaya. Kulokhu kufakana umlomo, uHlabisa ukhombise ukuba nombono ngokufanele kwenzeke ukuze kuhlengwe ingomuso lezakhamuzi zaKwaZulu-Natal ikakhulukazi ezasemakhaya. Le ngxoxo ihambe kanje:
Usuyawushiya manje uMasipala iBig 5 Hlabisa owuqale umncane njengoba usukhule kangaka. Yikuphi ongathi ukwazile ukukufeza kule minyaka uphethe?
UMasipala iBig 5 Hlabisa ngesikhathi umuntu azoshiya ngaso komasipala bonke baKwaZulu- Natal abasemakhaya yiwona ozolandela iNewcastle odabeni lokuhlinzekwa kwawo wonke umphakathi ngogesi. Sesisalelwe yimizi eyi-1 120 kuMasipala wonke engenawo ugesi futhi yonke ingaphansi kohlelo lokufakelwa kulo nyaka wezimali esiya kuwona wezi-2019/20. Ngokuphela kwawo, kufanele sifinyelele ekuhlinzekweni kwawo wonke umuntu waseBig 5 Hlabisa ngogesi.
Okwesibili, KwaZulu-Natal ngaphansi kohlelo lokunikezelwa kwezindlu eziyisibonelelo sikaHulumeni, wuMasipala iBig 5 Hlabisa ohamba phambili kubo bonke abakwazile ukunikezela abantu ngezindlu. Omunye angathi wumsebenzi kaHulumeni wesifundazwe lo, kodwa kuya ngokuthi umasipala wendawo unjani ngoba baningi omasipala bendawo basemakhaya kodwa abekho abasesimweni esifana nesethu.
Thina udaba lokuhlaliswa kwabantu nezindlu salubeka eqhulwini. Lusafika, ezindaweni eziningi bebelunqaba, thina sazemukela izindlu. Manje uma sebeqala ukubona ukuthi kanti lezi zindlu kazenzi amalokishi futhi kaziphenduli indawo ibe nobugebengu thina sesivele sihambe ibanga elide.
Uma uza ohlelweni oluqondene nengqalasizinda, sakhe imigwaqo eminingi ebingekho esikhathini eside esedlule. Sakhe nezakhiwo imiphakathi ehlanganela kuzo, okungamahholo omphakathi asezingeni amanye awo afana nongawathola emadolobheni.
Umuntu esikhathini asebenze kusona ukwazile ukubeka induku ebandla, wawuguqula lo Masipala ekubeni ngosemuva nowasemakhaya. Kwenye ingxenye yawo uma ufika ebusuku, njengaseMpembeni, ungabuza ukuthi yini igama laleli lokishi ngoba abantu bakhona bakhelene ngokusondelana. Kusemakhaya kodwa indlela abakhelwe ngayo ihlelekile. Uma usekudeni ungaze uthi kusedolobheni. Konke lokhu kuze ngesikhathi umuntu esebenza kule ndawo yeBig 5 Hlabisa.
Kule minyaka engaka usebenza ezingeni likamasipala wendawo osemakhaya, ubone ziphi izinselelo ezibakhungethe, futhi bangaphuculwa kanjani?
Inkinga enkulu koHulumeni Bendawo wuhlelo lokuhlinzekwa kwabo ngemali olusetshenziswayo ngaphansi kweDivision of Revenue Act (DORA). Alubhekeleli izinga lentuthuko endaweni njengengqalasizinda, kodwa lubuka isibalo sabantu.
Uma uya emakhaya lapho ebesisele emuva iminyakanyaka, uma usinikeza imali ngokuthi abantu bangakanani, ungabheki ukuthi sisilele kangakanani ngentuthuko, akwenzi mehluko.
Ukube komasipala kwenziwa uphenyo kuqala ukuze kubonakale ukuthi abantu abadinga ugesi bangaka, abadinga amanzi bangaka, abadinga imigwaqo enetiyela bangaka. Imigwaqo yasemakhaya iwubhuqu yonke ngenxa yokuthi lokhu kwadalwa yisimo sobandlululo esisuka kulona. Kufanele sikhumbule ukuthi emadolobheni imigwaqo yakhandwa uHulumeni ngesikhathi sobandlululo, ayikhandwanga ngamarate, okuyinto engenzekanga emakhaya.
Ngaso sonke isikhathi omasipala abaningi, ikakhulukazi, abakhelwe yizindawo ezisemakhaya bayohlala besemuva ngenxa yokuthi imali engenayo ayenzi umehluko, ngaphandle kokuthi yenze okuncane kokukhulu okungabe kuyaguquka.
Ukunikezwa kwemali kufanele kuye ngezidingo bese kwakhiwa uhlelo lwesikhathi esithile sokuzifeza, njengokuthi eminyakeni emihlanu ngizonikeza imigwaqo engaka, ugesi ongaka, izindlu ezingaka. Ngaleyo ndlela ngabe umehluko usuyabonakala.
Eqinisweni aboHlanga bayakwazi ukubekezela. Esikhathini esiyiminyaka engama-25 izwe likhululekile, kufanele ngabe abasemakhaya sebenayo yonke into abanayo abahlala emadolobheni okuyimigwaqo, ugesi, amanzi nokuthuthwa kukadoti. Kufanele ngabe siyizakhamuzi ezifanayo ngoba kuthiwa sikhululekile sonke. Abantu basemadolobheni impilo yabo ingcono ngoba yasizwa yisimo sikaHulumeni waphambilini. Abasemakhaya omasipala basemuva ngenxa yesimo sikaHulumeni wesikhathi esedlule.
Okwesibili, oHulumeni Bendawo laba basemakhaya abakwazi ukuheha abantu abangongoti njengezikhulu zokusingathwa kwezimali, onjiniyela nabaphathi. Bonke laba ubathola emadolobheni ngenxa yobungcono bempilo khona. Uma uthi mabaye kumasipala osemajukujukwini bazobuza ukuthi izingane zabo zizofunda kuphi, babuke nemigwaqo abazohamba kuyo.
Ingaxazululwa kanjani le nkinga?
Kufuneka kube nohlelo olukhethekile lokuhlinzeka ngokunxephezela omasipala kule nselelo ngokuthi kuthasiselwe emiholweni yalaba bantu abadingeka kakhulu ukuthi baheheke ukuyosebenza ezindaweni zasemakhaya.
Kufuneka futhi uHulumeni akhe uphiko lokweseka oHulumeni Bendawo oluzohloma ngabantu abanawo wonke amakhono abucayi antulekayo abazotshalwa isikhathi esithile lapho bedingeka khona.
Into esiyibona manje, njalo uzwa ukuthi uHulumeni ungenelele ngeSigaba 139 soMthethosisekelo. Ngikhuluma nje KwaZulu-Natal omasipala bayisishiyagalolunye uHulumeni asengenelele kubo ngale ndlela singakagamanxi nasengxenyeni yokuqala emuva kokumiswa kwabo.
Kunohlelo lukaBack-to-Basics olunikeza isithombe esiphelele ngokusebenza kukamasipala nalapho olusilela khona emikhakheni eyehlukene. Lolu phiko lungakwazi ukusheshe lungenelele kungaze konakale kakhulu.
Uhlelo lukazwelonke lokusebenzisa asebephothule iziqu ukusiza omasipala lungolokufunisela. Lungaqaqa eyokuntuleka kwemisebenzi, hhayi eyokubhekana nezinkinga zomasipala. Uma ufuna ukuxazulula eyomasipala kudingeka ongoti kwezezimali, kwezobuchwepheshe njengobunjiniyela nakwezokuphatha. Umuntu ozothi uma umthuma laphaya angafiki ayofunisela ngoba efunda. Labo chwepheshe bangafika izinyanga ezithile, bawushiye umasipala ususimeme bese bedlulela kwenye indawo.
Uma kubonakala ukuthi kunenkinga, uHulumeni wesifundazwe kufanele angenelele ngokuthi uma bengatholakali abafuna ukuyosebenza komasipala abasemakhaya kwengezwe imihlomulo ukuze baheheke. Ngaphandle kwalokho, lena yeSigaba 139 eyokubhula umlilo, ayisona isisombululo.
Esikhathini esiningi kuzwakala ukuthi ukungasebenzi kahle komasipala kudalwa wukugxambukela kobuholi bepolitiki ezindabeni zokuphatha. Ayinkinga kangakanani amakhansela?
Inkinga ayikho kangako emakhanseleni ngoba wona angasohlangothini lwepolitiki. Inselelo isezisebenzini zomkhandlu ngoba amakhansela ngawokusebenza nabantu emphakathini, emukele izikhalo nezidingo zabo, kodwa yizisebenzi ezithatha izinyathelo ezifanele ukulungisa leso simo.
Udinga onjiniya, labo abanolwazi lokuphathwa kwezimali nezimenenja eziwaziyo umsebenzi wazo. Leyo ayiwathinti kangako amakhansela ngoba izisebenzi ezihlome ngamakhono afanele yizo ezichushisa amakhansela. Kufana nakongqongqoshe, lapho uthola ukuthi abanye kabanazo neziqu, kodwa bayakwazi ukusebenza ngokwelekelelwa yizisebenzi eziqeqeshiwe, eziwaziyo umsebenzi wazo.
Amakhansela ayazinika izisebenzi isikhala sokuphefumula, zenze umsebenzi wazo. Awasemaningi amakhansela aphoqelela izisebenzi ukwenza okuthile. Esikhathini esedlule ngiyavuma bekwenzeka. Ngesikhathi kusungulwa omasipala, ngenxa yokuthi lwalungekho uhlelo lokuhlomisa amakhansela ngolwazi lomsebenzi, bekuba lula ukugxambukela ngoba abengawazi umugqa ukuthi unqamuka kuphi owekhansela nesikhulu sikamasipala. Njengamanje amakhansela ayaqeqeshwa kakhulu futhi iningi liyile esikoleni. Aseyakwazi ukwehlukanisa phakathi kweso lokwelusa (oversight) nokugxambukela.
Ukhiphe isitatimende sokuthi ihoxiswe esikhundleni iMeya yaseMandeni lapho okuqubuke khona udlame lomphakathi, kwashiswa izimboni kwazitatshelwa nasezitolo. Sizosixazulula kanjani lesi simo?
Ayiqali manje inkinga yaseMandeni. Ngowezi-2016 kuyiwa okhethweni lo masipala abantu baseMandeni abangamalungu ikakhulukazi ka-ANC babhikisha, bekhala ngamakhansela ababefunzwe wona bengawafuni. Bashisa amafemu, bacekela phansi ingqalasizinda eningi.
Abaholi baka-ANC babancenga abantu, bathi bacela babavumele kudlule ukhetho, inkinga yamakhansela ababethi baphoqwe ngawo bazoyibona emuva kokhetho. Abazange bakwenze lokho. Ngale nkinga esesingena kuyo eMandeni sekusha amanye futhi amafemu, kulimala umnotho nezitolo zabantu abangangene kule nkinga kamfowethu iMeya yaseMandeni.
Kucekeleke phansi nezimoto zabantu ngenxa yokuthi abantu bathi uHulumeni ka-ANC wesifundazwe nobuholi buka- ANC abusigcinanga isethembiso abasebenza ngowezi-2016 sokuthi la makhansela abawaphoqelela ngenkani kubantu bazowagudlula. Manje bafuna lokho-ke abantu. Babala nenkohlakalo, baphatha namagama. Ubuholi buka- ANC kufanele ngabe kade udaba lweMeya bangenelela kulo. Abantu balimaza impahla emini, futhi bayaziwa abantu abenza lokho ukuthi bangobani ngoba kabazithukusile. Abaholi mabangabi mathintanyawo ukubhekana ngqo nomsuka wenkinga ngoba bebhekela ukuthi kuyiwa okhethweni. Lesi simo sizowuguqisa umnotho ngoba amafemu yiwo awumgogodla womnotho nenza imindeni eminingi ikwazi ukulala idlile.
Kungani uHulumeni ehluleka ukushesha ukuhogela umoya ngokungeneliseki kwabantu ukuze kunqandeke umonakalo ongaka ungakenzeki?
Akusikho ukuthi uHulumeni usuke engayiboni ingakenzeki le nto. Isibonelo nje, kunalolu daba lokushiswa kwamaloli oseluyinsakavukela. Abantu bayasho ukuthi amaloli bawashisa ngoba kuqashwe abashayeli bamazwe angomakhelwane.
Imingcele yethu ivuleke gengelezi. Kungena wonke umuntu emini ovela kula mazwe ezothatha amathuba omsebenzi abantu baseNingizimu Afrika. UHulumeni uyakwazi lokho, kodwa ukhetha ukushaya sengathi yinkinga angayiboni. Umphumela kusha amaloli nezimoto okuwumnotho wesifundazwe saKwaZulu-Natal.
Nodaba lwase-Alexandra, uHulumeni uthatha kude uma inkinga iqala abantu beyibeka. Futhi sebeze bayifunda abantu i-ANC ukuthi izwa kangcono uma kucekelwa phansi okukhona ukuze isukume kulokhu okhuluma ngakho, lokho-ke thina esingakwesekeli ngoba ikhambi lilodwa.
Uma kufika ukhetho mabakhiphe uHulumeni ongakwazi ukulalela abantu bafake ozokwazi ukubalalela uma bekhuluma naye. Uma lungakafiki ukhetho mabaxhumane nawo ngoba uHulumeni osuke uphethe unesibopho sokuthi ungalindeli abantu baze baphume esandleni anduba usukume. Namanje asikho isinyathelo esesithathwe yi-ANC ngodaba lwaseMandeni kanti abantu bayakwazi ukubona uHulumeni okwazi ukuthatha izinqumo nalowo othithizayo ukuthatha izinqumo.